Iyo Yakaderera Uye Inonyanya Kubudirira Zvekugadzira Zvigadzirwa ZveWebhu - Semalt Opinion
Zvishandiso zvekutsvaga webhutori zvinoshandiswa kuunganidza, zvimedu uye zvinyorwa kubva kune dzimwe nzvimbo. Kazhinji injini dzinotsvaga dzinoshandisa data yakatsvaga kuti icheke mapeji epawebhu uye inowana kuti mumatare ino iri kutaura nezvei. Kune vasiri vashandisi vezvigadzirwa, zvakaoma kuziva kuti ndeipi webhupu ing tools ndiyo yakanakisisa. Kusiyana neizvi, vatengesi vemakemikari uye makambani ekuongorora anoshandisa mberi web scraping uye crawler software kuitira kuti mabasa avo aite, uye havana dambudziko kusarudza chishandiso chakanaka.
Kubudisa Hub iyi ndiyo Firefox inowedzera nehuwandu hwekudhawa kwemashoko uye zvinhu zvekukwezva web. Inobatanidza tsvaga yako yekutsvaga uye inogona kuchengeta deta yakabudiswa nenzira yakakodzera uye yakavimbika. Outwit Hub ane user-friendly interface uye anogona kuparadzira imwe webhusaiti mune imwe nyaya yemaminitsi. Icho chimwe chezvinhu zvakanakisisa uye zviri nyore pane zvigadzirwa zvebhu webhusaiti paIndaneti.
2. Tumira. io:
Scraperwiki inonyanya kufambiswa webhusaiti yemugovera inouya pasina mari. Inopa data yakanyatsogadzirirwa pakarepo uye inowanika kuLinux, Windows, Unix uye Sun Solaris. Uchishandisa Scraperwiki, unogona kutora mafayela, mapikicha, uye mavhidhiyo nyore nyore pasina chero chidimbu chetsamba. Proxy support inowanikwawo nehuyu webhutler tool yekuwedzera kasi uye kuvimbisa kuvimbiswa.
Octoparse isimba zvikuru web scraper . Iyo yakakodzera kune marudzi ose e data uye nguva dzose inowana mhinduro yakarurama. Octoparse inogona kushandiswa kubvarura mawebhusayithi nehuwandu hwezvakanaka uye mabasa. Iyo ine mbiri miviri mikuru (Advanced Mode uye Wizard Mode) uye yakakodzera kune vese mapurogiramu uye vasina-programmers. Iko yacho-uye-click UI inokubvumira kubata data yako nenzira yemagwaro, HTML, uye Excel uye kuikanda iyo kuDisk disk mukati memasekondi.
Kimono ndeimwe yezvakanakisisa uye zviri nyore kushandisa webhusaiti yepadhi pamusungo. Iwe unogona kuishandisa kuti ubvise mawebhusayithi akawanda uye mabloggi uye utore iyo yose nzvimbo pa disk yako yakaoma. Iyo inonyatsozivikanwa nokuda kwerinoshandiswa-yakasununguka. Kana ukangotanga Kimono, iwe uchakwanisa kupinda URL uye kusimbisa data yaunoda kuparadzira. Ichachengetedza deta yakatsvaga yakachengetwa mune dheyo yayo kuitira kuti iwe ugone kuishandisa chero nguva uye kupi zvako. Kimono anotsigira mitauro inopfuura 13 uye anopa FTP kutsigirwa kune vashandisi vayo.
Mozenda inokurumbira yakakurumbira nemabasa akawanda uye zvinhu. Zvinobatsira vanotsvakurudza deta, vatengesi ve digital, uye mapurogiramu. Iwe unogona kutumira deta yako kuGoogle spreadsheets, uye Mozenda haambokundikani nehutano. Icho chinhu chakakosha kune vose vanotanga uye nyanzvi dzinoshanda zvakanaka mu web browser yako Source .